Fiarovana azo antoka miaraka amin’i Jesôsy | EGW Writings
Fahasoavana avy amin’i KristyFahavalo mailoIreo anjely mpiambinaManohitra ny drafitr’Andriamanitra ny anjely ratsyLoza
Azontsika atao ny mahita fialofana sy fahafahana eo amin’ny hery lehibe indrindra an’ilay Mpanavotra antsika. Hamafisintsika fatratra ny tranontsika amin’ny alalan’ny karetsaka sy ny hidimbaravarana mba hiarovantsika ny fananantsika sy ny aintsika amin’ny olon-dratsy; nefa mahalana no hiheverantsika ireo anjely ratsy izay tsy mitsahatra ny manafika antsika kanefa tsy. manana fomba hoenti-miaro ny tenantsika amin’izany fanafihana ataony izany isika, raha amin’ny herintsika samirery. Raha avela hanao izany izy, dia ho vitany ny hamilivily ny saintsika, ny hampijalijaly ny tenantsika, ny handrava ny fananantsika sy handringana ny aintsika. Fa ireo izay manaraka an’i Kristy kosa dia voaaro mandrakariva noho ny fiambenany sy ny fikarakarany. Misy anjely mahery indrindra hirahina hiaro azy. Tsy vakin’ilay ratsy ny fiarovana izay nahodidin’Andriamanitra ny vahoakany.IFL 21.1